ပြည်တွင်းမှာအလုပ်ရှာမယ်ဆိုရင် .. အရေးအကြီးဆုံးအချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » ပြည်တွင်းမှာအလုပ်ရှာမယ်ဆိုရင် .. အရေးအကြီးဆုံးအချက်
ပြည်တွင်းမှာအလုပ်ရှာမယ်ဆိုရင် .. အရေးအကြီးဆုံးအချက်
Posted by zawthulay on Aug 2, 2011 in Ideas & Plans | 19 comments
ဟိုးအရင်က ပညာအရည်အချင်းတွေ၊ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ ရှိရင် အလုပ်ကောင်းတွေ ရကြပါတယ်.. ဒါပေမယ့်အခုအခါမှာတော့ အရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူး.. အလုပ်ကောင်းကောင်း၊ လစာကောင်းကောင်း လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဆက်အသွယ်ကောင်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်.. အဆက်သွယ်ကောင်းဆိုတာက ရုံးအရာရှိတွေ အရေးပါတဲ့သူတွေကို နဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေကိုပြောတာပါ နောက်တစ်ခုက ပိုက်ဆံပုံပြီး အလုပ်ကောင်းကိုရှာတာပါ ဥပမာ ရာထူးကြီးကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံပုံပေးလိုက်တာနဲ့ အလိုလျောက်ရသွားတာပါပဲ တက်ကျွမ်းဖို့မလိုတော့ပါဘူး အလုပ်ရောက်မှသာ အလုပ်ကသင်ပေးသွားခြင်းဖြစ်ကြပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လည်း အရမ်းကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရှိကြပဲ နိုင်ငံခြားမှာသာ သွားလုပ်ကြပါတော့တယ် ဒီမှာက ပညာတတ်ကျွမ်းသော်လည်း အလုပ်မရကြပါဘူး .. ရည်ညွှန်းချင်တာကတော့ ၀န်ထမ်းတွေ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အဆက်အသွယ်ကောင်းကို သာရှာကြပါ.. အကယ်လို့အဆက်အသွယ်ကောင်းမတွေ့ အလုပ်ကောင်းမရဆိုရင်တော့ နိုင်ငံခြား မှာသာ ၃ နှစ်တန်သည် အလုပ်လုပ်ပြီးမှ ဒီမှာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကြပါလို့ ကျွန်တော့်အမြင်ကိုပြောပြ လိုပါတယ်… လိုအပ်တာများရှိရင် ဝေဖန်အကြံပေးနိုင်ပါတယ်
View all posts by zawthulay →
အမျိုးတော်ရင် ရမယ် (အဖေ့ကုမ္ပဏီ ဆိုရင်ပေါ့)
လက်ဖက်ထုတ် တော်ရင် ရမယ် (အပေးအကမ်း အစွန့်အကြဲ ပေါ့)
သိပ် ထူးချွန်ရင်တော့လဲ ရနိုင်တယ် (နိုင်တယ်လို့ပဲ ဆိုတယ်)
ဟုတ်ပေးပါ့မယ်..၅၀ဆိုရလား..အဟိ နိုင်ငံခြားငွေတော့မဟုတ်ဘူး မြန်မာငွေကိုပြောတာနော်. ဟီး
ရုံးဌာနတွေဆို ပိုဆိုးသေးတယ် … ။
အပြင် ကုမ္ပဏီတွေလည်း ဒီလိုပါပဲ နီးစပ်ရာခေါ်ခန့်တာ များပါတယ် …နီးစပ်ရာရှာမရမှသာ တမျိုးတမည် စဉ်းစားတာ … ။ ဆက်စပ်နေတော့ … တခုခုပြသနာတက်လျှင် အမျိုးရှိတဲ့အခါ လှမ်းချုပ်ထားလို့ ရအောင်ထင်တာပဲ .. ။
ဟုတ်ပါ့ အရည်အချင်း မရှိပဲရေအတွက်ပဲ ရှိနေကြတာလေ တော်တော်များများ ပါ ပဲ
ခုခေတ်ကြီးကကိုယ်ဘယ်လို ကြိုစားမယ်မရှိဘူး သူများဦးနှောက်ဖောက်စားချင်တဲ့သူတွေလဲရှိသေးတယ်နော်
လူကြီးသားသမီးတွေကလည်း ကောင်းတဲ့နေရာဌါနမှာ နေရာယူထားကြတာလေ..။
အလုပ်ကို မနက် 8 နာရီလောက်ကနေ နေ.လည် 11 နာရီ ထိပဲ လုပ်ရပါမည်
တစ်နေ. 3000 အနည်းဆုံးရပါမည် လုပ်ချင်လျှင် ရွာပြန်ထယ်ထိုးပါ
ရန်ကုန်ထက်တော. သာတယ်နော် အိပ်ရေးလည်း ၀တယ်
ကျနော်တောင် ကျောင်းပြီးရင် ထယ်ပြန်ထိုး စားကောင်းမလား စဉ်းစားနေတာ
ကျွန်မတို့ ဆီမှာတော့ မူလတန်းပြ ဆရာမတယောက်ဖြစ်ဖို့ ပေးရကမ်းရတဲ့ ငွေ ၅သိန်းပေးရပါတယ်။အင်းအတိအကျပြောရင်. ကြိုတင်နှစ်သိန်းပေးရပါတယ်။အားလုံးပြီးလို့ မူလတန်းပြရပီဆိုတာနဲ့ နောက်သုံးသိန်းထပ်ပေးရပါတယ်။အေ%E
မူလတန်းဆရာမ မလုပ်ပဲ မူကြို ဆရာမလုပ်ပါလား … ။ ကိုယ်ပိုင်ဖွင့်နိုင်လျှင်တောင် …ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ လိုက်ကြည့်ပြီး လာဘ်ထိုးစရာ မလိုဘူးလေ … ။
we got problem for HR, we need Q staff but we have so bed staffs. Why? Our payment is about 70000ks .
လစာ ခုနှစ်သောင်းကို များတယ်လို့ ထင်တာလားဗျို့ … ။ ဒီခေတ်မှာ အရည်ချင်းရှိတဲ့လူတွေရဲ့ လစာက အနည်းဆုံးတောင် တစ်သိန်းအထက်မှာရှိတယ် … ။ အများဆုံးကတော့ … ကျွမ်းကျင်မှူနဲ့ လုပ်သက်ပေါ်မူတည်ပြီး အစားစားပေါ့ … ။
ခုနှစ်သောင်းလောက်နဲ့ ချက်ချင်း ကွာလဖီဖြစ်တဲ့လူ ရှာလို့ရချင်မှ ရပါလိမ့်မယ် .. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆလာရီက အထရက်တစ်ဖ် မဖြစ်လို့ပါပဲ … ။ လူကောင်းလိုချင်လျှင် ကွန်ပဲတတစ်ဖြစ်တဲ့ ဈေးနဲ့ … အပြိုင်ရှာမှ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ။
ဖြစ်နိုင်တာ တစ်ခု ပြောကြည့်မယ် … ။ ခုနှစ်သောင်းလောက်နဲ့ … လူသစ်မွေးပြီး … ကွာလဖိုင်းဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ကြည့်ပါ … ကိုင်တွယ်တတ်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတာပါ … နောက်ပိုင်း အားကိုးရတဲ့လူ ဖြစ်လာလိမ့်မယ် … ။လူသစ်ကလည်း သူ့အနေနဲ့ … ဒီလောက်ရလျှင် ကျေနပ်မှာပဲ … ဒါနဲ့ ကြိုးစားသင်ယူလိမ့်မယ် .. ။ အလုပ်ခွင်အစပိုင်းကတော့ ဈေးသိပ်မပေးနိုင်လျှင် နည်းနည်းတော့ အခက်ခဲရှိမှာပါပဲ .. ။
I want to Q staffs.Where shall we find?
That is very important thing not only in Myanmar but also in many developed coutries according to “my experience”.
ဦးတေဇကုမ်ပဏီဆိုပိုဆိုးသေး လူကြီးသားသမီးပဲ ခန့် တယ်လို့ပြောကြတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ အလုပ်အရမ်းပေါပါတယ် အနိမ့်ဆုံးလစာတောင်မြန်မာငွေနဲ့တွက်ယင်တသိန်းခွဲလောက်ရကြတယ် ဒါပေမဲ့အလုပ်ချိန်ကတော့တနေ့11း00ရှိတယ် မြန်မာပြည်နဲ့တော့အများကြီးသာပါတယ် တယ်လီဖုံးသုံးယင်တရုတ်ငွေ 30ပေးနံပါတ်တခုရတယ် အင်တာနက်သုံးယင်တလ 98ယွမ်းဘဲရှိတယ် တတ်ဆင်ခလုံးဝမရှိပါ ..အသက်၅၀ကျော်၆၀တွေတောင် အလုပ်နေတာတွေ့ရတယ် အပြင်ရောက်လေကိုယ့်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအသုံးမကျမှန်းပိုသိလေပါဘဲ……